Free Thinker: ဆီးချိုသမားတစ်ဦး၏ ဒုက္ခ
၁။ ဆီးချိုကျခြင်း အန္တရာယ်
မနေ့က (၁၊ ၆၊ ၂၀၁၀) ညစာစားအပြီး ပျို့ချင်သလိုလို၊ အန်ချင်သလိုဖြစ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး နေမထိ ထိုင်မသာနှင့် ရှိနေသဖြင့် ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်၊ အစားများ များသွားလို့လား စသဖြင့် အတော်နေလို့ ထိုင်လို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါသည်။ နောက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရီလာကာ ချွေးစေးများပြန်လာသဖြင့် ဆီးချိုကျတာ ဖြစ်မည်ဟု ကမန်းကတန်း သွေးဖောက်စစ်လိုက်တော့ ထင်သည့်အတိုင်းပင် ဆီးချိုမီတာက 3.6 ဟု ပြနေပါသည်။
ပုံမှန်ဆိုလျှင် ထမင်းစားပြီးခါစ၌ ဆီးချိုတိုင်းကြည့်ပါက 9.0 မှ 10.5 ထိ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့မရှိလျှင်တောင် အနည်းဆုံး 8.0 တော့ ရှိရမည်ဖြစ်၏။ ယခု 3.6 ဆိုတော့ အတော်အခြေအနေဆိုးသည် ခေါ်ရပါ မည်။ အခန့်မသင့်လျှင် သတိတောင်လစ်နိုင်သည်။ သို့နှင့် ကျွန်တော်လည်း သကြားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့် တစ်ဇွန်းအပြည့် ကောက်မျိုချလိုက်ရပါသည်။ သို့နှင့်တောင် ပုံမှန်အနေအထားကို တော်တော်နှင့်ပြန်မရောက်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲနေရ၏။ မအီမသာနှင့်တော်တော်လေး ခံလိုက်ရပါသည်။ ခဏနေတော့ ပါးစပ်ထဲ တံတွေးများ များလာ သဖြင့် ရေစင်သို့အသွား အလွန်အန်ချင်လာသည်နှင့် ပလတ်စတစ်အိတ်ကို အမြန်ဖွင့်ကာ ရေစင်၌ ထိုးအန်ချလိုက် ရ၏။ ယနေ့ညစာ စားထားသမျှ အကုန်ပြန်ထွက်သွားသည်။ ဗိုက်ထဲ အစာမရှိတော့မှ နေရထိုင်ရ အတော်သက် သာသွားပါသည်။
နာရီဝက်ခန့်ကြာမှ တော်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားပါသည်။ သို့သော် ဘာမှဆက်မလုပ်နိုင်တော့သဖြင့် ဖွင့်ထားသောကွန်ပြူတာကို ပြန်ပိတ်၊ ဖျော်ထားသော ကော်ဖီကို ဆန်ကာနှင့်အုပ်ကာ အိပ်လိုက်ရသည်။
ပုံမှန်ဆိုလျှင် အစာစားပြီး ဆီးချိုချက်ခြင်းကျသည်ဆိုသည်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ။ မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်ရသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း မကြာခဏ ဆီးချိုကျဖူးပါသည်။ သို့သော် ယခုမှ ထမင်းစားပြီးခါစဆိုတော့ ဖြစ်စက ဆီးချိုကျတာ မဟုတ်ဟု ထင်မိ၏။
ဆီးချိုသမားများအတွက် အဓိက အန္တရာယ်မှာ ရုတ်တရက် ဆီးချိုကျခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှာ သို့မဟုတ် ရုံးမှာ ဆိုလျှင် ကိစ္စမရှိ။ အကယ်၍ ကားမောင်းနေစဉ် သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ကားပေါ်၊ ရထားပေါ်လို ဘာမှ မရနိုင်သည့် နေရာမျိုးမှာ အလွန် အန္တရာယ်များပါသည်။ ကားမောင်းနေစဉ် ဆီးချိုကျပါက ကားကိုမထိန်းနိုင်ပဲ accident ဖြစ်တတ် သည်။ ခံနိုင်ရည်နည်းသူများအဖို့ မူးမိုက်ကာ လဲတတ်သည်၊ ချက်ခြင်းမေ့တတ်သည်။
သို့အတွက် ထိုအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် ဆီးချိုသမားများသည် သကြားလုံးကဲ့သို့သော စားစရာများ အိတ် အတွင်း အဆင်သင့်ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။ သို့မှ အချိန်အခါ နေရာမရွေး ဆီးချိုကျသည်နှင့် တစ်ခုခု ကောက်စား လိုက်လို့ ရပါသည်။ ဆီးချိုရှိသူများ အထူးသတိထားသင့်ပါ၏။ ဆီးချိုကျလျှင် သကြားဓါတ်ပါသော အစာတစ်ခုခုကို အလျှင်အမြန်စားရန် လိုပါသည်။
တစ်ခါကလည်း Pulau Ular ကျွန်းရှိ ECC project တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ်က ဖြစ်၏။ အလုပ်မှ ပြန်အလာ သည်ဘက်ကမ်းပြန်ရောက်တော့ သင်္ဘောပေါ်မှ ဆင်းဆင်းချင်း ဆီးချိုကျ၏။ ကားဂိတ်သို့ မနည်းအပြေးအလွား လာရသည်။ ထို့နောက် Clementi မှ ဆိုင်တန်းများရှိရာသို့ သုတ်ခြေတင်ကာ သီးမွှေးငှက်ပျောသီး တစ်တွဲဝယ်၍ တစ်လုံးကို အမြန်နွှာကာ ပလုတ်ပလောင်းစားလိုက်ရသည်။ တစ်လုံးနှင့် မပြေ။ သုံးလုံးဆင့်ကာ စားလိုက်မှ တုန်တာ ပျောက်သွားသည်။
ဆီးချိုကျသည့် လက္ခဏာမှာ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရီလာကာ ချွေးစေးများပြန်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူးဝေ အော့ အန်ခြင်းများလည်း ဖြစ်တတ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါအတွက် သုံးလလျှင် တစ်ခါ ကျွန်တော်ဆေးစစ်ရပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ် ဆေးစစ်တော့ ဆီးချိုတက်နေသည်။ သို့အတွက် ဆရာဝန်က ဆေးတိုးပေးလိုက်၏။ ယခင်က Metformin 850mg မနက်တစ်လုံး၊ ည တစ်လုံး၊ Glitazone 5mg မနက်နှစ်လုံး၊ ညနှစ်လုံး သောက်နေရာမှ ယခု Glitazone ကို မနက်သုံးလုံး၊ ညသုံးလုံး တိုးပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆီးချိုက ကျမသွား။ တက်မြဲတမ်းတက်နေ၏။ ကျွန်တော်လည်း ချိုတာမှန်သမျှ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါသည်။ သကြားပါတာ ဘာမှမစား။ သိကြားနှင့်တိုးမှာစိုး၍ သင်္ကြန်မှာတောင် ရေပက်ခံမထွက်။ အချိုရှောင်တာဆို မချိုဆီတောင် ဖုံးမဆက်တာကြာပေါ့။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လောက်က ဇက်ကြောတွေ မချိမဆန့်တက်လာသဖြင့် စာတောင် ကောင်းကောင်းမဖတ် နိုင်။ ညီမအငယ် ဂွမ်းဆီဖုံးဆက်တော့ အစ်ကိုကြီး ဆရာဝန်အမြန်သွားပြလေ ဆိုသဖြင့် ပင်နင်စူလာမှ ဒေါက်တာ ဆီ သွားပြသည်။ ကျွန်တော်က ဆီးချိုအကြောင်းပြောသဖြင့် သူစစ်ကြည့်ရာ 10.2 ဖြစ်နေသဖြင့် သူက Metformin မနက် 1000mg, နေ့လည် 1000mg, ည 1000mg တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ခိုင်းရာ နေ့ခင်း ဆေးသောက်အပြီး ဆီးချို ကျသဖြင့် နေရထိုင်ရ အတော်မသက်သာ၍ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် နေ့ခင်းဆေးကို ဖြတ်လိုက်သည်။ (မူလက မနက် 850, ည 850 သာ သောက်နေရာမှ ယခု တစ်နေ့ကို 3000 ထိ တိုး ပေးလိုက်တာ အတော်များမှန်း သိပါသည်။) ဇက်ကြောတက်တာအတွက်မူ ဆေးထိုးပေးလိုက်၏။ သောက်ဆေးလည်း တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ရန် ပေးလိုက်သည်။ အားဆေးအဖြစ် B12 ပါပေးလိုက်သည်။ ထမင်းမစားနဲ့ဗျ။ ဂျုံခေါက်ဆွဲ နဲ့ ပဲကြာဇံ ပြောင်းစား ဟုလည်း အကြံပေးလိုက်ပါသေးသည်။
သို့သော် ထိုဆေးကို တစ်ပတ်မျှသောက်သော်လည်း ဇက်ကြောတက်နေတာ ပျောက်မသွားပါ။ သို့အတွက် ကျွန်တော် မမဆီဖုံးဆက်ပြီး အကြံတောင်းတော့ သူက Polyclinic သွားပါလားဟဲ့ ဟုဆိုပါသည်။ ညီမ မူမူ ကမူ အစ်ကိုကြီး၊ အသက် ၄၀ ကျော်လာတဲ့သူတွေမှာ အရိုးကြီးပေါင်း တက်တတ်တယ်။ အရိုးကြီးပေါင်းတက်ရင်လည်း အရမ်း ဇက်ကြောတက်တယ် ဟု ပြောပါသည်။ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်လည်း ပြနေကျ Jurong Polyclinic ကို သွားပြပါသည်။ ကံကောင်းတော့ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေသော ဆရာဝန် ဒေါက်တာအောင်သိန်းနှင့် တွေ့ပါသည်။ (ယခင် အခေါက်ဆေးစစ်စဉ်အခါများက ကျွန်တော် သူနှင့် မကြာခဏ ပြဖူးပါသည်။ နောက်တော့ ဆေးခန်းတွင် မတွေ့ရ တော့ဘဲ ယခုမှ ပြန်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဤကား စကားချပ်။)
ကျွန်တော်က ဇက်ကြောတက်နေကြောင်း ပြောသောအခါ ဒေါက်တာအောင်သိန်းက စမ်းသပ်ပြီး ခင်ဗျား၊ အာရုံကြောကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ အရိုးကြီးပေါင်းတက်တာပေါ့ ဟု ဆိုကာ ဓါတ်မှန်သွားရိုက်ခိုင်းပါသည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး အဖြေကို တစ်နာရီစောင့်ရ၏။ အဖြေရ၍ ဆရာဝန်ဆီပြန်သွားရာ သူက အရိုးကြီးပေါင်း စတက်နေသည်။ သတိထားပါ။ ခေါင်းငုံ့ရသော အလုပ်မလုပ်ပါနှင့်။ ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့် မအုံးပါနှင့်။ ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါဟု ဆိုသည်။ ရောဂါ တစ်ခု ပြီး တစ်ခု တိုးလာနေခြင်းအပေါ် စိတ်ပျက်မိပါသည်။ သို့သော် ဘာများတတ်နိုင်ပါမည်နည်း။
(ကျွန်တော် လောလောဆယ် ဆီးချိုနှင့် Hyperthyroid ရောဂါနှစ်မျိုးအတွက် ဆေးသောက်နေရပါသည်။)
သူက ကျွန်တော့်ယခင်အပတ်များက ဆေးစစ်ချက်များကို ကြည့်ပြီး ဆီးချိုတက်ပြီးရင်း တက်နေသည် ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော်ကလည်း ဟုတ်ကြောင်း၊ ယခုသောက်နေသော ဆေးများပြောလိုက်၏။ သူက Metformin 850mg ကို မနက်တစ်လုံး၊ နေ့ခင်းတစ်လုံး၊ ညတစ်လုံး သောက်ဖို့ပြောလိုက်၏။ သို့နှင့် နောက်နေ့ ၁-၆-၂၀၁၀ တွင် Metformin 850mg နေ့ခင်းတစ်လုံးတိုးသောက်လိုက်သည်။
ညနေ အလုပ်မှပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အိတ်ကို ဘုတ်ကနဲပစ်ချကာ အ၀တ်လဲလျှက် Jurong Lake Park ပန်းခြံထဲတွင် 3km ပြေးပါသည်။ မပြေးတာကြာပြီ။ ယခု ဆီးချိုများတက်ပြီးရင်း တက်နေသဖြင့် ပြေးဦးမှတော်မည် ဆိုကာ ပြေးခြင်းဖြစ်ပါ၏။ နေ့ခင်းကလည်း ဆေးသောက်ထားသည်။ ဘီစကစ် သုံးလေးချပ်မှလွဲ၍ တစ်နေ့ခင်းလုံး လည်း ဘာမှမစား။ ယခု တော်တော်ဆာနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း မပြေးခင် ဘာမှမစားချင်သေး၍ ၂၅ မိနစ်ခန့် ပြေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြေးရာမှ ပြန်အလာ ဆီးချိုဆေးသောက်အပြီး ဗိုက်အရမ်းဆာနေသည်နှင့် နွားနို့တစ်ဖန်ခွက် သောက်လိုက် ပါသည်။ သို့သော် ဆီးချိုကျချင်သည့် လက္ခဏာများပြလာသဖြင့် ရှောက်ချိုသီး တစ်ခြမ်းလည်း စားလိုက်ပါသေးသည်။ ထို့နောက် ၀က်ခေါင်းစွပ်ပြုတ် လုပ်သောက်သည်။ ready made ခေါက်ဆွဲတစ်ခွက်လည်း စားလိုက်ပါသေး၏။ စားတာ နည်းနည်းများသွားသည်။
အဲ - စားလည်းပြီးရော အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သလို ဒုက္ခ အလွန်များပါတော့သည်။
၃။ ဆီးချိုစဖြစ်ခြင်း (ရောဂါလက္ခဏာများ)
၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လခန့်က ကျွန်တော် Marine Teknik တွင် ဒီဇိုင်နာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျွန်တော် ဘာဖြစ်မှန်းမသိ။ လမ်းမလျှောက်နိုင်။ လှေခါးမတက်နိုင်။ လမ်းအနည်းငယ်မျှ လျှောက်လျှင်ပင် အလွန် ပင်ပန်းမောဟိုက်ကာ ခြေမသယ်ချင်၊ လက်မသယ်ချင် ဖြစ်နေပါသည်။ တော်သေး၏။ အလုပ်က စားပွဲတွင်ထိုင်ကာ တွက်ချက်၊ ပုံဆွဲနေရသဖြင့် ဘယ်မှ သိပ်မသွားရ။ သို့သော် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့် အိမ်၊ ရုံး တို့ကို သွားနေရတာပင် အလွန်ပင်ပန်းလှသည်။ လှေခါးလေးငါးထစ်မျှကိုပင် မနည်းအားယူပြီး တက်နေရ၏။
ထိုအကြောင်း မမဆီဖုံးဆက်တော့ သူက ပျားရည်တွေ ပို့ပေး။ စတုမဓူတွေစား နှင့် ဘယ်လိုမှ အားတက် မလာပါ။ ပိုဆိုးသည်က ညဘက်တွင် ခြေလက်များ မခံမရပ်နိုင်အောင် ပူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်မျှ ပူသနည်းဟူမူ မအိပ်နိုင်၍ ရေခွက်ကို နံဘေးတွင်ထားကာ ခြေခုံနှင့် လက်ဖမိုးများကို အ၀တ်ရေစိုဖြင့်မပြတ် အုပ်ထားပေးရပါသည်။ ကြာသော် ရေခွက်ထဲမှ ရေများပင် ပူလာသည်ဟူ၏။ ထို့ပြင် နံနက်အိပ်ယာထပြီး အပြင်ကိုကြည့်လိုက်လျှင် ရှုခင်းများမှာ ရေဆေးပန်းချီတစ်ချပ်ကို ကြည့်ရသည့်နှယ် ဖြစ်ပါ၏။ တိုက်တာများ သစ်ပင်များမှာ အရောင်နှင့် ခပ်ဝါးဝါး သာ မြင်ရပါသည်။ မိမိရှေ့ မလှမ်းမကမ်းတွင် ထိုင်နေသည့်သူကိုပင်လျှင် မျက်နှာကိုသေသေချာချာ မမြင်ရပါ။ မျက်မှန် တပ်လျှင်မူ စာဖတ်၍ရပါသည်။
ဤသို့ဖြစ်ပြီး တစ်ညတွင်မူ ခေါင်းများဂျွမ်းသဒ္ဓါလန်အောင်မူးကာ ချွေးစေးများပြန်လျှက် ဘယ်လိုမှနေလို့မရ သည့်အဆုံး ဆေးခန်းသို့သွားပါသည်။ Jurong Point မှ Acumed ဆေးခန်း ဖြစ်ပါ၏။ အရေးထဲမှ လူနာများ များနေသဖြင့် တစ်နာရီနီးပါးစောင့်ရသည်။
ကိုယ့်အလှည့်ရောက်သော် ဆရာဝန်ကို ကိုယ်ခံစားရသည်များ ပြောပြလိုက်၏။ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်ကို ရှေ့တည့်တည့် လမ်းလျှောက်ခိုင်းသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့သို့ဆန့်တန်းထားခိုင်းသည်။ ထို့နောက်တော့ မင်းဖြစ်နေ တာ ဆီးချိုဖြစ်မယ် ဆိုကာ ဆီးချိုတိုင်းကြည့်တော့ မျက်လုံးပြူးစရာ တွေ့ရပါ၏။ ပုံမှန်လူကောင်းတစ်ဦးအနေနှင့် ဆီးချို ပမာဏမှာ 5.5 mmoL/L သို့မဟုတ် 99 mg/dL သာဖြစ်ရပါမည်။ ယခု ကျွန်တော့်သွေးကို ဖောက်စစ်လိုက်တော့ ဆီးချိုမီတာက 33 mmoL/L ပြနေပါသည်။ အဆမတန်တက်နေခြင်း ဖြစ်၏။
ဆရာဝန်က အချိုလုံးဝမစားဘို့၊ ထမင်းလျှော့စားဘို့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဘို့၊ whole grain cereal များစားဘို့ စသည်ဖြင့် ပြောလိုက်ပါသည်။ သည်တော့မှ ကျွန်တော်က အားနည်းသည်ထင်လို့ ပျားရည်တွေသောက်လေ ဆီးချို တွေမတရားတက်လေ ဖြစ်နေမှန်း သိရပါတော့သည်။ တော်ပါသေးရဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်ပေလို့။ ဒီလို ဆီးချိုအရမ်းတက်ရင် coma ရတတ်တယ် ဟု အန်ကယ် ဦးအုံးကျော်က ပြောပါသည်။ သူက ၀ါရင့်ဆီးချိုသမားကြီးဖြစ်၏။
သည့်နောက်တော့ ကျွန်တော် အသီးအရွက်စွပ်ပြုတ်သောက်ခြင်း၊ ထမင်းလျှော့စားခြင်း၊ အချိုရှောင်ခြင်းတို့ လုပ်ခဲ့ရာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါသည်။ သည်မှစ၍ ဆီးချိုဒုက္ခသည်များအသင်းတွင် အသင်းဝင်တစ်ဦးတိုးပွားသွားပါ တော့သည်။
၄။ ဆီးချိုသမားတစ်ဦး၏ ဒုက္ခ
ဆီးချိုဖြစ်ပြီဆိုသည်နှင့် ဆီးချိုနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်စာတမ်းများ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ၀င်ရောက်မွှေနှောက်ဖတ်ရှု။ http://www.diabeticdietsecrets.com တွင် mail list တင်ထားရာ သူတို့ကလည်း နေ့တိုင်းမပြတ် အီးမေးလ်များပို့ပေးပါ၏။ အစပိုင်းတော့ နေ့တိုင်းလိုလို ဖတ်ဖြစ်သေး၏။ သိတယ်မို့လား။ လူဆိုတာ ကြာတော့ ရိုးသွား၊ သည်တော့ သုံးလေးရက်တစ်ခါမှ ဖတ်ဖြစ်။ ယခုတော့ ဖတ်တောင် မဖတ်ဖြစ်တော့။ ၀ါရင့်၊ သမ္ဘာရင့်ဆီးချိုသမားကြီးများထံ ချဉ်းကပ်မေးမြန်း။ သည်ကြားထဲ သာဂဒိုး၏ နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင် စာအုပ်များသည်လည်း လူကြားထဲ ခေတ်စားနေချိန် (အချို့ဆို သည်စာအုပ်များ ကြောင့် စာအုပ်ထဲပါ စူလာနဖာပင်ကို နှုတ်ရောင်းတာနှင့် ဆန်အိုးကို ဆန်မပြတ်အောင် ဖြည့်တင်းနိုင်သည် ဆို၏။) ဖြစ်ရာ စူလာနဖာဆိုတာ ဘယ်ပုံရှိသလဲဟု လိုက်လံမေးမြန်း၊ မြက်ခင်းမှန်သမျှ ရှောက်ရှာ။ စူလာနဖာတွေ့သည်နှင့် နှုတ်ပြီး ပြုတ်သောက်။
လုံးတီးဆန်ကပိုကောင်းတယ် ဆိုသဖြင့် လုံးတီးဆန်ဝယ်စား။ (စင်ကာပူမှာတော့ဖြင့် လုံးတီးဆန်က ပို ဈေးကောင်းနေပါလား ကိုယ့်ဆရာ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ထောင်သားတွေကိုကျွေးတာ ဆိုလား။ ဒါဖြင့် ဒို့ဆီက ထောင် သားတွေ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ဆန်စားနေရတယ်တောင် ဆိုရမလို။)။ ကွေကာအုတ်ကြမ်းကိုကြိုကာ ဆားခပ်သောက်။ အသားပြုတ်ပြီး ဟင်းရွက်နှင့် (ထမင်းမစားဘဲ) စွပ်ပြုတ်လုပ်သောက်။ လဖက်ရည် - သွား။ ကော်ဖီ - အနားမကပ်နှင့်။ ဘီယာ (အဲလေ အရင်ကလည်း သောက်လေ့သောက်ထ သိပ်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့ သူများတိုက်မှ တစ်ခါတစ်လေသောက်တာပါ၊ အဟိ။) နံပြတ်။ ကိုကာကိုလာ ဖြစ်ဖြစ်၊ မ’ လာ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မ၀င်စား။ ယခင်က မကြာခဏ စားဖြစ်သော လမ်းဘေးတွင် လှည်းကလေးနှင့်ရောင်းသည့် တစ်ကျပ်တန် ရေခဲမုန့်ကို သေခန်းပြတ်။
ဘယ်လောက်ဒုက္ခများသနည်းဟူမူ လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ သူငယ်ချင်းများနှင့် ၀င်သွားလျှင် ဘာမှာလို့ မှာရမှန်းတောင် မသိ။ နောက်ဆုံး Chinese Tea ခေါ် တစ်ခွက် ပြား ၆၀ ပေးရသော ရေနွေးကြမ်းသာ မှာသောက် လိုက်ရတော့၏။ စားစရာဆိုလို့ နထ္ထိ။ NTUC ထဲဝင်သွားလျှင်ရော။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် (ဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ကလောဥ မပါ)၊ အသားငါးကလွဲလျှင် တခြားစားစရာ ဘာမှ ၀ယ်စရာမရှိ။ ကျွန်တော်က အသီး(fruit) စားရတာ သဘောကျသည်။ ယခင်က MRT ပေါ်တွေ့တွေ့နေရသည့် ကြော်ငြာဖြစ်သော Take an appleaday, keep the doctor away. ဆိုသည်ကို သဘောကျကာ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ပန်းသီးတစ်လုံး အချိုတည်းနေကျ ဖြစ်၏။ ယခုတော့ ပန်းသီး တစ်လုံး မရတော့။ တစ်ခြမ်းတောင် ဆီးချိုတက်လှချည့် ဆိုသဖြင့် တစ်စိတ်ကိုသာ အာသာပြေ စားရတော့သည်။ စပျစ်သီးလား - ဆောရီး။ ဖရဲသီး - ဟင့်အင်း။ သင်္ဘောသီး - မတည့်ဘူး။ ငှက်ပျောသီး - ဆီးချိုအရမ်းတက်တယ်။
ကော်ဖီမစ် - သောက်လို့မရဘူး။ ရယ်ဒီမိတ်ကွေကာအုတ် - သကြားပါလို့။ Milo - ချိုတယ်လေ။ ပေါင်မုံ့ - Whole meal ကို ၀ယ်ပါကွယ်။ တယ်လေ၊ ငါ၊ စိတ်တိုလာပြီ။ ဟုတ်ပါ့။ ခုတော့ ထမင်းကို လုံးတီးဆန်တစ်ဝက်၊ ဆန် ချောတစ်ဝက်ရောကာ။ တစ်ခါစားလျှင် နို့ဆီဗူးတစ်ဝက် မပြည့်တတ်ပြည့်တတ်။ (ထမင်းအိုးထဲပါသည့် ဆန်ချင်ခွက်မှာ နို့ဆီဗူး တစ်ဝက်နှင့် ညီပါသည်။ ထိုခွက်နှင့် မပြည့်တတ်ပြည့်တတ်။) တစ်ခါတလေ ညစာကို ထမင်းမစားဘဲ စွပ်ပြုတ် သာသောက်လိုက်တော့သည်။
မနှစ်ကတော့ သုတပဒေသာထဲမှာ အိန္ဒိယက ဆီးချိုအမြစ်ဖြတ်တဲ့ဆေး နောက်နှစ်ဆို ဈေးကွက်တင်နိုင်ပြီ ဟု ဖတ်လိုက်ရသည်။ ခုထိတော့ ဘာသတင်းမှ မကြားရသေး။ ခပ်သွက်သွက်ကလေးလုပ်ကြပါဗျာတို့။ ဘယ်လောက် ဈေးကြီးကြီး ၀ယ်သောက်ပြစေ။ နေ့တိုင်း မနက်ပြန် ညပြန် ဆေးသောက်နေရတာကြီး ငြီးငွေ့လှပေ့ါ။ နောက်ပြီး အမြဲတမ်း ဆေးခန်းမှာ ဘွတ်ကင်ယူထားရတယ်။ ဆေးခန်းနဲ့ ထာဝရမိတ်ဆွေကြီးကို ဖြစ်လို့။ ခုတစ်ခါပြ၊ ပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ခါသွားရမဲ့ရက်ကို ဘွတ်ကင်ယူ။ နောက်တစ်ခါသွားပြ၊ နောက်တစ်ခါ ပြန်ပြရမဲ့ရက်ကို ဘွတ်ကင်ထပ်ယူ။ ဟူး - မောပါ့။
ဆီးမချိုချင်ကြပါနှင့်။ ခုထက်ထိတော့ အမြစ်ပြတ်အောင် ကုနိုင်တဲ့ဆေး မပေါ်သေးပါ။ ဖြစ်မိပြီဆို မိန်းမယူမိတာထက် ဆိုးသေး။ မိန်းမကမှ အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီး ယောက္ခမအိမ် ပြန်ပို့ထားလို့ရသေး(ခဏပေါ့နော)။ ဆီးချိုကိုတော့ ဘယ်ယောက္ခမအိမ်မှ သွားပို့ထားလို့မရ။ အရိပ်ပမာ မခွဲခွာ။
သိချင်သူများအတွက် နည်းနည်း ဗဟုသုတ ပြောပြရဦးမယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ် သရက်ရွက်က ထုတ်ပေးနေကျ အင်ဆူလင်ကို အပြည့်အ၀ မထုတ်ပေးနိုင်တော့လို့ဖြစ်စေ၊ လုံးဝ မထုတ် နိုင်တော့လို့ ဖြစ်စေ၊ ထုတ်လိုက်တဲ့ အင်ဆူလင် အာနိသင် မပြည့်ဝတော့တာကြောင့်ဖြစ်စေ သွေးချိုဖြစ်ပါတော့၏။ အင်ဆူလင်သည် စားလိုက်သမျှအစာထဲရှိ ဂလူးကို့စ်၊ ဖရူးတို့စ် စသော သကြားဓါတ်များကို အင်အားအဖြစ် ပြောင်းပေး၏။ အင်ဆူလင်က အလုပ်မလုပ်တော့ ထို ဂလူးကို့စ် စသော သကြားဓါတ်များသည် အားမဖြစ်တော့ဘဲ သကြားအဖြစ်သာ ဆက်ရှိနေခြင်းကို သွေးချိုသည်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုချိုနေသော သွေးမှ သကြားဓါတ်အချို့ကို ကျောက်ကပ်က နိုင်သလောက် ချက်ပေးပါ၏။ သူမနိုင်တော့သည့်အခါတွင်မူ ဆီးပါချိုလာကာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပါတော့သတည်း။
ဆီးချိုကား မျိုးရိုးလိုက်တတ်၏။ မျိုးရိုးအလိုက်ဖြစ်သော ဆီးချိုကို ကု၍မရ။ ၎င်းကို Diabetic Type A ဟု ခေါ်သည်။ အများအားဖြင့် ဆေးသောက်၍ မရ။ အင်ဆူလင် ထိုးရသည်။ ဆီးချိုအနုအရင့်ကို လိုက်၍ အင်ဆူလင် ဘယ်နှယူနစ် စသဖြင့် ထိုးရ၏။
မျိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာသော ကျွန်တော့်လို ဆီးချိုးသမားကျတော့ Diabetic Type B ဟု ခေါ်၏။ သူကတော့ ကုလို့ရရန် မျှော်လင့်ချက်ကလေး ခပ်ရဲ့ရဲ့ ရှိသေးသည်။ ကောင်းတာကတော့ အစားအသောက်နှင့်ထိန်း။ Control by meal. ဒါပေသိ။ အင်မတန်ခက်တာကလား။ လူဆိုတာမျိုးဟာ အချိုကြိုက် တတ်လေတော့။ မလွယ်ပါချေ။ သည်တော့ ဆေးနှင့်ထိန်း။ ဆေးခန်းပုံမှန်ပြ။
အဓိကရန်သူကား ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် ဖြစ်၏။ မိတ်ဆွေတို့သိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် ဆိုသည်မှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့သုံးထပ်စားနေသော ထမင်း (ပေါင်မုံ့) ဖြစ်ပါ၏။ (ထမင်းနဲ့မတည့် ဆိုမှတော့ သေပြီဆရာ။) ဗီတာမင်နှင့် ပရိုတိန်း အဓိကထား စားပေး။ (ဗမာပြည်က လူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရိုက်ပေါက်။ ဟဲ့အကောင်၊ ပရိုတိန်း၊ ပရိုတိန်းနဲ့ လျှောက်လျှောက်ပြောမနေနဲ့။ ၀က်သားတစ်ပိဿာ ဘယ်လောက်များမှတ်လို့လဲ။) ဒါဆို ငါး စားပေါ့ဗျာ။ (အောင်မယ်၊ လာချေသေး၊ အကြောင်းသိရအောင် ရှင် တစ်ခါလောက် ဈေးသွားကြည့်စမ်းပါ။)
ချိုတာမှန်သမျှ အကုန်ရှောင်ပါ။ (ချိုပြုံးဓါတ်ပုံတောင် မချိတ်ပါနဲ့။) စေးကပ်တဲ့ ဥပမာ၊ အာလူး၊ မျောက်ဥ၊ ကောက်ညှင်း မတည့်ပါ။ သကြား၊ နို့ဆီများနှင့် ဖျော်ထားသည့် လဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ မတည့်ပါ။ အချိုရည်အားလုံး မတည့်ပါ။ အရက်၊ ဘီယာ မတည့်ပါ။ ဆေးလိပ်- ကြိုက်တတ်လျှင်တောင် ဖြတ်ဖြစ်အောင် ဖြတ်လိုက်ပါ။
သစ်သီး (fruit) အားလုံးလိုလို မတည့်ပါ (ပြီးပါလေရော။) ကျွန်တော်ကတော့ သခွားသီးခပ်လတ်လတ်တွေ ၀ယ်၊ ရေဆေး၊ ဆားနဲ့တို့ပြီး ဒီအတိုင်းကိုက်စားလိုက်တယ်။ (ဆားနဲ့တို့စားဗျ၊ ဒီအတိုင်းစားရင် သိပ်အရသာမရှိဘူး)။
ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်း၊ မုန်လာ၊ ကျောက်ဖရုံသီး၊ ငြုပ်သီး၊ ပဲသီး၊ သခွားသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး။ (ကိုက်သာ ကြည့်လိုက်ပါဗျာ၊ မချိုဘူးဆို အကုန်တည့်တယ်။)
အသား (နီတဲ့အသားဆို ပိုတည့်တယ် ဆိုပဲ။)၊ ဥ၊ ငါး၊ ပုဇွန်(ကြိုက်သလောက်စား)
ဆန်ကြမ်း (မနန်းခမ်းမြစိန်ကတော့ ဘာစမာတီဆန် စားခိုင်းတယ်)။ ဂျုံကြမ်း၊ ဂျုံကြမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုံ့ (ပေါင်မုံ့ကြမ်း)။
ဆီးချိုကား ကြောက်ဖို့ကောင်း၏။ သူတစ်ယောက်ထဲ မနေတတ်။ ကြာလာသောအခါ ပျင်းလှသည်ဟု သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ် စသော အပေါင်းအပါများကိုပါ ခေါ်ယူတတ်ချေသေးသည်။ very complicated ဟု ပြောကြပါသည်။ ဆီးချိုတက်တာကြာလျှင် ကျောက်ကပ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ မျက်လုံးကို ပြဿနာရှာသည်။ ခြေထောက်များကို မျက်စောင်းထိုးသည်။ ကြပ်ကြပ်သတိထားကြပါ။
Posted by အေးငြိမ်း at 1:00 AM